भिमे – ३ | BLOGSTREET
त्यो दिन निमबहादुर सधैंजस्तै इनार खन्न चक्रलालको घर पुगेको थियो। इनार के कति खन्नुपर्ने भन्ने त निमबहादुरलाई थाहा थियो होला तर त्यो दिन काम सुरु गर्दा झण्डै दुई फिट अघिल्लै दिन खनिसकिएको थियो। भर्खर भात खाएर पुगेको निमबहादुरलाई निहुरेर माटो खन्न र खनेको माटो उबाएर माथि फाल्न कठिन परिरहेको थियो। चक्रलाल निमबहादुरलाई अह्राउ पह्राउ गरेर निस्किसकेको थियो। चक्रलालकी स्वास्नी मखमली घर धन्दा गर्दै थिई सायद।
घाम चर्किंदै थियो। आगँनमा इनार खनिरहेको निमबहादुरको निधारमा विस्तारै पसिना उम्रिन थालेको थियो। चुपचाप खनिरहेको निमबहादुर माटो लागेकै हातले घरिघरि निधारको पसिना पुस्थ्यो र निधारमा त्यहि हातले पाली बनाएर आँखा चिम्सो पारेर घामलाई हेर्थ्यो। त्यसो गर्दा पसिनाले लतपतिएको उसको घाँटी पनि एकैछिन ओभाउन पाउँथ्यो। हाफप्यान्ट र भेस्टमा कस्सिएको निमबहादुरको शरिर माटो खन्दै गर्दा झन् पुष्ट देखिन्थ्यो, व्यायाम गर्दै गरेको पहलमानको जस्तो। तर न अग्लो न होचो, न दुब्लो न मोटो, ठिक्कको ज्यान परेको निमबहादुर जीउ खास्साको देखिन्थ्यो।
निमबहादुरले फेरि निधारको पसिना पुस्यो। निधारमा फेरि अलिकति माटो दलियो। मुख सुकेजस्तो भयो। घाम चक्रलालको ३ तले घरको माथि छतमा पुगिसकेको थियो। निमबहादुरले घरलाई तलदेखि माथिसम्म हेर्‍यो। चहकिलो पहेंलो रँग पोतिएको घरको माथिल्लो तल्लाको झ्यालमा गएर निमबहादुरका आँखा टक्क रोकिए। त्यहाँ मखमली झ्यालको पीँधमा कुहिना अड्याएर उसैलाई हेर्दै रहिछ।
“पानी खान्छौ निमे?” निमबहादुरले उसलाई देखेपछि मखमली बोली।
“अँ दिनुस् न, साह्रै गर्मी लायो।” निमबहादुरलाई पानी तिर्खा लागेकै थियो।
“माथि नै आऊ। एकछिन आराम गर।” मखमलीले दया देखाई।
“हैन, ह्यैँ दिनुस्। काँ माथि आ’र आराम गरेर बस्नु? बसेर काम सकिन्न मेरो!” निमबहादुरले सोझो जवाफ दियो।
मखमली मुसुक्क हाँसी। त्यो मुस्कानले निमबहादुरको जवाफलाई बेवास्ता गरिरहेको थियो।
मखमली राम्री थिई। उमेर त्यहि ३०-३२। ठकेदारकी स्वास्नी भन्न सुहाउने ठाँट थियो। खासमा मखमली चक्रलालको छोरो मारिएपछि केहि समयमा यो घरमा भित्रिएकी हो, गन्धर्व विवाह। चक्रलालकी पहिलो श्रीमती १०-१२ वर्षअघि कुनै रोगले बितेकी थिई। चक्रलालले मखमलीलाई जबरजस्ती विवाह गर्न मनाएको हो भन्ने पनि सुनिन्छ यदाकदा। हुन नि चक्रलालको उमेर झण्डै ५० पुगिसकेको हुनुपर्छ।
मखमली यो घरमा भित्रिनु ५-६ वर्षअघि एकपटक के भएको थियो अरे भने बनेपातिरबाट एकजना केटा आफ्नो बाउसँग मखमलीको हात माग्न मखमलीको घर आएका रहेछन्। कुरा मिल्यो पनि। विवाहको दिन जुराउन मात्रै बाँकी। कताकताबाट चक्रलालको कानमा यो कुरा पुगेछ। अनि त के चाहियो, ४ जना ठिटा लिएर ढुकेर बसेको चक्रलालले त्यो केटा र उसको बाउलाई फर्किने बेला बाटोमा भकुर्न सम्म भकुरेछन्। छोड्ने बेलामा मखमलीलाई फर्केर नहेर्ने शर्तमा चक्रलालले छोडेछ। कुरा त्यतिमै सकिएको भए त हुन्थ्यो, तर कुटाई भेट्ने परेर पुलिसको सई। त्यसपछि महिनौंसम्म के के भयो, तपाईं आफैं अनुमान लाउनुस्। आखिरमा १० हजार क्षतिपुर्ति तिरेर चक्रलाल यो फन्दाबाट मुक्त भयो अरे तर मखमलीसँग त्यो सईको विवाह भएन। मखमलीलाई त्यसपछि कुनै केटा माग्न आएन।
अँ, कथामा फर्किऊँ। मखमलीले झ्यालबाट निमबहादुरलाई पानी खान बोलाई। निमबहादुरलाई तिर्खा त लागेको थियो तर ३ तल्ला माथि चढेर पानी खाऊँ जस्तो लाग्ने गरी चाहिं तिर्खा लागेको रहेनछ भन्ने कुरा माथि उल्लेख संवादले छनक दिन्छ। अनि के भयो त?
“आउ न आउ… जति गरे पनि आजै खनेर सक्ने त हैनौ क्यारे तिम्ले। भोलि अरु २ जना ज्यामी नथपी तिम्ले माटो उबाउन सक्ने नि हैनौ।” मखमलीले जोड गरी।
“त्यो त हो, तै’नि आइले चिं आउन्न। एकछिन खनम्।” निमबहादुरले नि जोड गर्‍यो।
निमबहादुर तिर्खा बिर्सिएर फेरि खन्न थाल्यो।
मखमली चुप लागेर झ्यालबाट हेरिरही। निमबहादुरले माटो खनेको हेर्दाहेर्दै मखमलीलाई चाहिं बरु गर्मी हुन थाल्यो।
म भिमे किन गायब भयो भन्ने बताउन खोज्दैछु। मखमलीलाई लागेको गर्मी र निमबहादुरको हराएको तिर्खाबिचको साइनो नै भिमे गायब हुनुको मुख्य कारण हुनुपर्छ भन्ने अनुमान मैले लगाएँ। तर साँच्चै त्यहि नै हो त कारण?
भिमे गायब हुनुअघि:
त्यसको झण्डै तिन घण्टा पछि भिमे त्यहि ठाउँमा हातमा साबेल लिएर आगो भएर उभिएको थियो जहाँ उसको बाउले तिन घण्टाअघि झ्यालतिर हेर्दै मखमलीसँग पानी मागिरहेको थियो। छेउमा चक्रलाल टाउकोबाट रगत बगाउँदै त्यहाँबाट भागेको थियो । त्यो देखेर ढोकातिरबाट मखमली अत्तालिंदै उल्ली र बिल्ली गर्दै चिच्याउँदै भिमेतिर दौडँदै आउँदै थिई। भिमेले भागौं कि उभिरहूँ भन्ने सोच्न नभ्याउँदै मखमलीले लात्तीले भिमेलाई लडाईदिई। भिमेको रिसको पारो सेलाएको थिएन। उसै त रातो पिरो भिमे झन् दन्कियो। जर्‍याकजरुक्क उठ्यो, भुईंमा झरेको साबेल समायो र बजायो मखमलीको टाउकोमा ड्याङ्गै।
मखमलीले चुइँक्क पनि आवाज निकाल्न नपाई लहरे पीपलको रुख ढलेजस्तो ढली। भिमेले अरुबेला दिमाग चलाउन सक्दैन थियो। त्यो बेला उसले के सोच्न सकोस्? साबेल हुत्याउँदै भिमे त्यहाँबाट सुइँकुच्चा ठोक्यो।
त्यसरी भागेको भिमे गाउँबाटै भाग्यो र फर्केर कहिल्यै आएन। भिमे गायब हुनुको मूल कारण यत्ति हो। घटनापछि प्रहरीले उठाएको मुचुल्काले पनि यहि बताउँछ। प्रहरीलाई चक्रलालले दिएको बयान र दुई दिनपछि बल्ल होसमा आएकी मखमलीले दिएको बयान पनि झण्डै झण्डै यहि छ।
तर भिमेको यो कथाको मूल कथा भिमे गायब भएजसरी गायब भएको बिचको तिन घण्टामा भएको घटना हो। वर्षौंसम्म पनि मैले त्यो कथा मिलाएर भन्न सकिरहेको छैन।